Kwasungulwa eminyakeni emithathu nje emva kokuthi i-Google ihlanganiswe, Wikipedia namuhla yiyona enkulu kunazo zonke izilimi eziningi, i-web-gebaseerde, i-ensiklopedie yamahhala. Eqinisweni, liphakeme kakhulu ezinsizeni ukuthi kuyamangaza ukuthi isayithi alizange ibeke i-catchphrase ekhethekile njenge "Google dit" (Ngomuntu siqu, ngililalela igama layo elingamangali).
Noma kunjalo, ngokusho kwe-Alexa, i-Wikipedia namuhla ibonakala njengesayithi yesihlanu elivakashelwa kakhulu kwi-Intanethi, elandela ngemuva kokuthandwa kwe-Google, i-YouTube, i-Facebook ne-Baidu ngaleyo ndlela. Kuthiwani-Wikipedia – Wikipedia is ‘n abaningi badanda futhi nokho, bambalwa kangaka abakhuluma ngakho?
1 Kuyini i-Wikipedia?
2 Vertoon ook op Wikipedia ‘n ‘yayay imali
3 Ubani odala okuqukethwe kwe-Wiki?
4 Indlela Onganikela Ngayo kwi-Wikipedia
5 I-Wikipedia iyatholakala ngezilimi eziningi
6 Okuqukethwe Okuvunyelwe Ku-Wikipedia?
7 Inhoud van Wikipedia-inhoud
8 Ikusasa le-Wikipedia
Kwaqala nguJimmy Wales noLarry Sanger ku-2001, isisekelo nesisekelo sezobuchwepheshe sesayithi okwedlule lokhu.
Unyaka wawuyi iphuzu langempela lokuqalisa lesayithi, lapho bekusebenza khona kusukela ekuhambeni. Kuzichaza ngokuthi "i-ensiklopedie yamahhala, ebhaliwe ngokubambisana ngabantu abasebenzisa yona."
Namuhla, i-Wikipedia ingenye yezindawo eziningi ze-"wiki" ezikhokhelwa futhi ziphathwe yi- Wikimedia Foundation, inhlangano engenzi inzuzo ezinikezele emsebenzini okhandlayo: ulwazi lwamahhala kubo bonke.
Vertoon ook op Wikipedia ‘n ‘yayay imali
Yebo, ngisho nie-inzuzo kudingeka uthole imali. Umehluko kuphela ukuthi isiteshi esingenzi inzuzo izimali zabo emuva ekuqhubekeleni phambili umsebenzi wabo, esikhundleni sokudonsa imali emikhulu kuma-aandeelhouers nabanikazi.
Ngakho njengesevisi yamahhala engaqhubi ngisho nokugijima izikhangiso kusayithi labo, i-Wiki ihlala kanjani?
Phela, kukhona izindleko eziphawulekayo kumaholo, ubuchwepheshe ngisho web ukusingathwa! Ukubamba ngewebhu kuphela kuyabangela in Wikipedia bied $ 2 miljoen dollar aan.
Impendulo ilula – izimali eziningi kukhona iminikelo.
Ngonyaka wezezimali we-2017, i-Wikimedia Foundation inqobe ngemali engaphezu kwezigidi ezingu – US $ 80 – ngaphezulu koa-90% yemali engenayo yonke. Ukukhipha ngaphezulu kwayo njengamaholo kanye nezinye izindleko futhi isisekelo sisalokhu singaphezu ku-US $ 20 miljoen dollar.
Kuthatha isisekelo kuphela amasenti angu-9 ukuphakamisa idola ngalinye eliza kulo. Emazwi kaJimmy Wales ngokwakhe, "I-Wikimedia Foundation iyamangalisa kakhulu izindleko. Isabelomali sethu sonyaka sincane kakhulu uma kuqhathaniswa nezimbangela eziningi ezifanele kakhulu, futhi umthelela wethu ukhulu kakhulu. "
Ake sibone ukuthi ingabonisa yini lokho ku-2017:
Ukuvakasha het 15.000.000.000 ngenyanga
Izihloko ezintsha ze-5
Dit is 119 Wikimedia namaqembu omsebenzisi kuwo wonke amazwe we-50
Izibalo zobunikazi be-Wikipedia kanye nabasebenzisi.
Ubani odala okuqukethwe kwe-Wiki?
Okuqukethwe kwe-Wikipedia kudalwe yiwo wonke umuntu. Empeleni kungenye yezikhathi zokuqala zokubamba iqhaza, kwaqala ngaphambi kokuba leli gama lihlelwe ngokusemthethweni. Abantu abakha nokugcina lokhu okuqukethwe bavela emhlabeni wonke.
Lokhu kuvumela ukuba baqoqe amakhono amaningi nobuchwepheshe bokuthuthukisa lokho okuzokwaneliseka okuyiqiniso, okubekwe eceleni kwemikhombandlela ecacisiwe futhi kusesikhathini. Ibuye ivumele ezinye izinhlamba ukuba zigijime, njengezitayela ngabanye kanye nokulandisa.
Laba baxhasi babizwa ngokuthi "ama-Wikipediane", Noma "abahleli" futhi cishe wonke amavolontiya.
Ngaphandle kokudalwa kokuqukethwe, am-Wikipedia alandela imihlahlandlela eqinile ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kukhishwe kulungile. Ukusiza kulokho, nabo benza njengamandla okuzimela, behlola okuqukethwe okudalwe abanye futhi baqinisekise ukuthi kulandela imihlahlandlela efanele.
Indlela Onganikela Ngayo kwi-Wikipedia
U-ngabe kukhona okuqukethwe okudalwe in-Wikipedia, negengoba kukhulunywe ngenhla kubuyekezwa ngokubheka ngokuvumelana. Ngenxa yobuchwepheshe bedijithali, i-Wikipedia ayikhawulelwe ubude bokuqukethwe okungafani nenguqulo yokuphrinta. Yini elinganiselwe kodwa yikuphi okuqukethwe okungakwazi ukufakwa futhi akukwazi ukufakwa.
Abadali bokuqala bokuqala bayakhuthazwa ukuba baqale ngokubuka okuqukethwe okukhona futhi bahlole amakhono abo lapho. Lokhu kwenziwa ngokuqhubeka nayo futhi nokwenza izilungiso uma kungenakulungile noma ukungeza okuqukethwe ukuze kwandise usizo noma ukunemba okwenzile kakade.
Uma ungaqiniseki ngokuhlela okuqukethwe, ungachofoza lapha ukuvakashela lokho i-Wikipedia ibiza ngokuthi ‘i-Sandbox’ en u kan ook gebruik maak van die ukusebenzisa umhleli wayo. Akulona kunzima kakhulu futhi kufana neprosesa yegama, noma ngabe ukusebenza okuningi kuhloswe ukuthi ku-intanethi.
I-Wikimedia Foundation ithi:
Kuyinqubomgomo ye-Wikipedia ukwengeza ku-ensiklopedie izitatimende eziqinisekakalayo kuphela, futhi ukungangezi ucwaningo lwangempela. Igayidi yesitayela seWikipedia ikhuthaza abahleli ukuthi basho imithombo. Izingcaphuno ezinemininingwane zivumela abafundi bendatshana ukuthi baqinisekise kalula okuqukethwe okukhulunywa ngakho.
Isitatimende esilula sittinghela konke.
Ukuze ujoyine-Wikipedia-gebruikers, konke okudingeka ukwenze kukhishwa ku-Wikipedia en u kan dit gebruik. Khona-ke uzokhuthazwa ukuba ubuyekeze ngokugcwele yonke imihlahlandlela kanye nezifundiswa kulokho ama-Wikipedia kufanele afanele noma akufanele akwenze ukuze agcine indawo isesimweni esiphakeme.
Yiqiniso, amanye amakhasi athi ‘avikelwe’ okusho ukuthi ngeke uvunyelwe ukuwashintsha ngokuqondile. Uma ubona noma yikuphi amakhasi evikelwe futhi uzizwa unamaphutha noma uthuthukiswa, ungangena ekuthintaneni nomhleli ongazihlela futhi enze isicelo.
Futhi, qaphela ukuthi ama-Wikipedian izivolontiya eziqinile futhi ungakhokhiwe.
I-Wikipedia iyatholakala ngezilimi eziningi
Kulabo abangezikhulumi zesiNgisi ezingezona izakhamuzi, ungakhathazeki, usengakwazi ukufaka isandla kulolu fantasti. Ek-Wikipedia vergelyking met phezu kwezilimi ezahlukene ze-300, kusukela Afrikaans kuya Winaray (ulimi lwasekhaya lwaseFilippines).
Igrafthi ye-Logarithmic yezinguqulo zolimi ezikhulu kakhulu ze-20 ze-Wikipedia (umthombo: Wikipedia).
Uma ungakhululekile ukufaka isandla ngesiNgisi, khetha kuphela izilimi eziningi ezitholakalayo futhi ungakwazi ukujoyina. Ulimi oludumile kakhulu luhlala ngesiNgisi nakuba lulandelwa yiCebuano nesiSwidi.
Kokuphuthumayo, kuye kwaba nokukhathazeka okuncane ukuthi inani labahleli belimi lwesiNgisi liye lancipha. Ku-2014 I-Economist yanyathelisa isihloko esithi "Ikusasa le-Wikipedia", Ngokusekelwe kwedatha enyatheliswa yi-Wikimedia. Lo magazini wenza ukuhlaziywa komkhuba futhi wathola ukuthi esikhathini esingaphezu kweminyaka eyisikhombisa, abahleli bezinguquko zesiNgisi bawa okungenani no-30%.
Okuqukethwe Okuvunyelwe Ku-Wikipedia?
Okuqukethwe kwe-Wikipedia kuhambisana nezinqubomgomo ezintathu eziyisisekelo;
Iphoyinti lokubuka elingathathi hlangothi – I-Wikipedia idinga ukuba konke okuqukethwe kwayo kube nokwaziswa okuvela embonweni ongathathi hlangothi. Isayithi liphikelela ukuthi yonke imibono kufanele ihanjiswe ngokufanele futhi ngaphandle kokuzikhethela, kungakhathaliseki ukuthi kukhonjwe yini.
Ukuqinisekiswa – Nakuba isayithi sidinga ukunikezelwa kokuqukethwe okungenzeka kube yinselele, kufanele kuthathwe ngokulinganayo ukuthi noma yini ongathanda ukuyibhala mayelana noma yokulungisa iyakwazi ukuqinisekiswa. Lokhu kuqinisekisa ukwethembeka kwamaqiniso ukuze abantu abathandayo ukufunda okuqukethwe ngeke baziswe.
Ayikho ucwaningo lokuqala – Nakuba imicabango yangempela ingase ibe yinto enhle, lokhu kubuyela ekudingeni kwe – Wikipedia ukuthi yonke imininingwane kufanele iqinisekiswe. Ngakho-ke ithi "Izihloko kungenzeka zingenakho ukuhlaziywa okusha noma ukwaziswa okushicilelwe okushicilela ukuthuthukisa isikhundla esingacacile kahle ngemithombo".
Ngokwethenjelwa lezi zinqubomgomo ezisemqoka zenza isayithi eliku-2017 – 2018, i-Facebook ne-YouTube lathi lizothembela ku-Wikipedia ukuze "basiza abasebenzisi babo ukuba bahlole imibiko futhi banqabe izindaba ezingamanga".
Ngokusho kukaNoam Cohen, ebhala eWashington Post,
Ondersoek na YouTube-kwi-Wikipedia, en dit is ‘n sosiale weergawe van die kwakha ekucabangeni-kwesinye isiteji esinselele, i-Facebook sosiale netwerk, en dit is ‘n vreemde taal in-Wikipedia ‘n abasebenzisi bayo ukuba baqede izinday eoikho.
Inhoud van Wikipedia-inhoud
I-Wikipedia ibike ukuthi kunabantu abaningi okwamanje abasebenzisa okuqukethwe kwabo futhi bayamukela okuningi ukwenza kanjalo. Noma kunjalo, ukusebenzisa kabusha kudinga ukuhlangabezana nokuhambisana nanoma yikuphi ilayisensi esebenzayo kokuqukethwe ofisa ukuyisebenzisa. Okufanayo kusebenza ezithombeni kusayithi.
Ngokuyinhloko, okuqukethwe kombhalo kungasetshenziswa ngaphansi kwemvume yelayisensi Yokuhlanganyela Yabelana Nge-Creative Commons Erkenning (CC-BY-SA). Umbhalo ongahlanganiswa nalokhu kuwela ngaphansi kwemigomo yelayisensi ye-GNU Free Documentation License.
Ngenkathi kunemihlahlandlela ngaphakathi kokubili layisensi (isb. Ukunikezwa, ukufinyelela kokukopisha, njll) ilungelo lokusebenzisa okuqukethwe okuningi akudingeki lithengwe.
Njengoba kushiwo ngaphambili, sekuphele iminyaka eminingi ukwehla okujwayelekile kubashicileli bokuqukethwe be-Wikipedia. Lokhu kubangelwa abanye ekusekelweni lapho isayithi liqondiswa khona – ukuhambisana ngokuqinile nezinqubomgomo eziyinhloko.
Lezo zinqubomgomo eziye zenza umthombo onokwethenjelwa kokuthandwa kwe-YouTube ne-Facebook nazo zenze kube yindawo enzima kwabahleli abasha ukungena kulo. Ngokudabukisayo, i-Wikimedia Foundation ayikwazi ukuyala umphakathi wokuzithandela ukushintsha indlela osebenza ngayo .
Kodwa-ke, isisekelo sesiye savuma ukuthi izindlela zayo zokusebenza kungenzeka ukuthi ziphelelwe yisikhathi futhi sekuye kwashintsha op die webwerf kanye nesofthiwe yayo ngethemba lokuthuthela endleleni eqhubekayo.
Isikhathi sodwa sizobe sittinghele ukuthi lezi zinguquko zizokwakha ukuvumela abahleli abasha namavolontiya ukuthi bafinyelele futhi babuthane ndawonye ukuze kube kuhle kwezwe. Ngikholelwa ukuthi umsebenzi we-Wikipedia owawuqala ekuqaleni wawungumuntu omuhle, futhi ngethemba lokuthi abanye bangabona okuhle okusasele.
谷歌搜索引擎，谷歌搜索引擎，Google Wikipedia namuhla yiyona enkulu kunazo zonke izilimi eziningi，基于i-web的i-encyclopedia yamahhala。 Eqinisweni，liphakeme kakhulu ezinsizeni ukuthi
Kwasungulwa eminyakeni emithathu nje emva kokuthi i-Google ihlanganiswe, Wikipedia namuhla yiyona enkulu kunazo zonke
Email- ի ihlanganiswe, Վիքիպեդիա անվանում yiyona enkulu kunazo zonke izilimi eziningi, i-web based, i-հանրագիտարան
Kwasungulwa eminyakeni emithathu nje emva kokuthi i-Google ihlanganiswe، Wikipedia namuhla yiyona enkulu kunazo zonke
Google-i ihlanganiswe, Vikipediya namuhla yiyona enkulu günazo zonke araşdırılması, i-veb əsaslı, i-ensiklopediya yamahhala. Eqinisweni,